Sida loo badbaadiyo mashaariic iMovie on Mac
IMovie waa barnaamijka video tafatirka ugu awooda badan ee kombiyuutarada Mac. Waa ay fududahay in la isticmaalo iyo waxa ay leedahay wax badan oo ka mid ah fursadaha. Xataa qaar ka mid ah xirfadlayaasha isticmaali iMovie sababtoo ah kala dooranayo. Si kastaba ha ahaatee, haddii aad bilaabayso, waxaad u baahan tahay in la ogaado waxyaabaha qaar, ka hor inta uusan bilaabin isticmaalka IMovie. Guud ahaan, waxaad u baahan tahay laba saacadood si '' ogaan '' kasta oo suurto gal ah iMovie. Ka dib markii in, waxaad ahaan doontaa qof xirfadle ah. Sida aad u rumaysataan, qaybta ugu muhiimsan waa in la badbaadiyo mashruuc. On kombiyuutarada Mac, tani waa ka sii yara murugsan badan ee kombiyuutarada Windows. Tani waa ka sii adag yahay haddii aad isticmaali PC iyo hadda ayaad isticmaalaysaa computer Mac ah markii ugu horeysay. Fursadaha qaarkood waxay leeyihiin magacyo gebi ahaanba kala duwan ee computer Mac ah ka badan on PC ah.
Qaybta 1aad: Sida loo badbaadiyo mashaariic la dhammeeyayna ay iMovie
Qeybta 2: Sida loo badbaadiyo mashaariic diiqid iMovie
Qeybta 3: Sida loo furo mashaariic diiqid iMovie ee computer kale
Waa maxay qaababka dhoofinta iMovie?
IMovie badbaadin karo mashruuc qaabab badan oo kala duwan. Waxaad u badbaadin waa in qaab adiga kugu habboon ugu fiican. Tusaale ahaan, haddii aad rabto in aad ka ciyaari movie in aad iPhone, waxaad badbaadin waa in ay qaab H.264 / MPEG-4. Xusuusnow in qalabka qaar ka mid ah aan ka furi doonaa mashruuca haddii Quraankan lagu soo badbaadiyey qaab aqlka. Kale, qaabab taageero IMovie waa: DVCPRO50-Pal; H.264 SD / HD B-jir ah; ; DV / DVCPRO-NTSC; Planar RGB; DVCPRO50-NTSC; H.264 / MPEG-4; Uncompressed; Photo-jpeg; ; Sorenson Video 3; H.261; H.263; Animation; AIC iyo H.261.
Sida loo badbaadiyo mashaariic la dhammeeyayna ay iMovie
Markaad dhammayso sixiddiisa aad video, waa in aad u badbaadin. Haddii aad baxdo ka iMovie ah, iyada oo aan lagu badbaadinayo file ah, aad horumar lagu lumin doonaa. On computer Mac ah, waa in aad u dhoofiyaan mashaariic aad, si aad u heli karto in folder Finder kasta. Dhoofinta ka dhigan tahay in aad file barnaamijka kombiyuutarka dhaqaaqi doono. Tani waa fursad la mid ah sida '' Save '' kumbiyuutarada iyo qalabka kale. Si arrintan loo sameeyo, waa inaad raacdid talaabooyinkan.
1. Marka aad furto IMovie ah, furo mashruuca lagu sameeyo ama mid cusub. Marka aad dhamaysid, guji Share ka dibna ku dhoofinta Movie. Waxaad arki doontaa liiska sare ee shaashadda.
2. Ku qor magaca mashruuca iyo doorato meesha aad rabto in aad u badbaadin. Waxaad arki doontaa wax menu pop-up ah. Waxaad sidoo kale riixi kartaa fallaadh iyo falgali meesha aad rabto si uu u badbaadiyo mashruuca.
3. Hadda, waxaad dooran kartaa size ee filimka. Shaxda idin tusin size ugu fiican ee qalab gaar ah. Waxaad ogaataa in saamiga dhinaca saamayn ku saabsan cabbirka aad movie. Tusaale ahaan, muuqa widescreen kordhin doonaa size ee mashruuca. Waxaad qaban karto si aad tilmaamaha ku saabsan '' Waxaan 'icon. 2 seconds ka dib, waxaad arki doontaa riixo ee video, heerka jir ah, heerka xogta iyo cabbirka filimka (ee megabytes). Riix dhoofinta iyo aad samaysay.
Hadda, marka aad rabto in aad si aad u ogaato mashruuca, oo dhan waxaad u baahan tahay inaad samayso waa in uu dedeg folder aad doorato ka menu pop-up ah.
User kasta oo doonaya inuu ka badbaadiyo mashaariic aan dhamaystirnayn oo meelaha qaar. Marka aad taas samayn, aad edit karaa mashruuca ee computer kale, ama sii tafatirka on your computer Mac marka aad rabto. Si kastaba ha ahaatee, haddii aad u baahan tahay caawimo, waa in aad badbaadin mashruuca diiqid oo sii wadi lahaa sixiddiisa on computer kale, halkaas oo saaxiib kaa caawin kara. Waa qaab waxtar leh in badan oo ka mid ah dadka isticmaala ay u isticmaalaan. Dhinaca kale, xirfadlayaasha u isticmaali waqtiga oo dhan. Iyagu ma buuxin kartaa mashruuc ku saabsan hal computer. Haddii ay noqoto in aad sii sixiddiisa aad mashruuca ku computer kale, waa inaad raacdid talaabooyinkan kuwa. Xusuusnow in mashruuc aan dhamaystirnayn oo la sameeyo kombiyuutarada Mac.
Sida loo badbaadiyo mashaariic diiqid iMovie
Haddii aad rabto in lagu badbaadiyo mashruuca IMovie taalo, waxaad u baahan doontaa in ay raacaan talaabooyinkan. Waa in aan ogaado in hab ka duwan yahay aad rabto in aad badbaadin mashruuc dhammeeyayna.
1. tag File-Open menu Library-New. Sii magac maktabadda cusub oo dooran meel badbaado ka menu dhibicda. Waxaa lagu talinayaa in aad dooratid drive saari karo.
2. Dooro folder Ahaado. Waxay noqon kartaa drive laga saari, ama waxay noqon kartaa folder kale qaar ka mid ah. Marka aad dhamaysid, guji Save, iyo mashruuca waa la badbaadin doonaa.
3. Hadda, waxaad leedahay laba maktabadood oo guddi navigation aad. Jiid jeedi mashruuca maktabadda, kaliya aad u abuuray. Taas macnaheedu waa in aad mashruucan ayaa la badbaadiyey.
Marka aad rabto in la furo mashruuca diiqid aad, ee computer kale, waa inaad raacdid talaabooyinkan. Nasiib wanaag, nidaamka waa mid aad u fudud oo aan u baahnayn wakhti badan. Waxaad ogaataa in labada versions of IMovie, waa inay ahaadaan qoraalkii isku mid ah. Tusaale ahaan, haddii IMovie ah oo ku saabsan mid ka mid computer Mac waa ugu dambeeyey, iyo ku kale waa qof aad u weyn, waxaa jira qaar ka mid ah dhibaatooyinka la furo aad mashruuca.
1. Daahfurka IMovie iyo surin aad drive saari karo ee kombiyuutarka. Xitaa Waxaad isticmaali kartaa kaadhka xusuusta ama HDD dibadda si ay u gudbiyaan faylasha aad. Tag menu File-Open Library-kale.
2. Riix badhanka Hel. Waa in aad tan u sameeya si ay u hesho drive saari karo oo la furo mashruuca.
3. Riix aad drive saari karo. Waxay ku taalaa geeska bidix. Markaas, ay helaan faylka aad rabto in la furo. Haddii aad leedahay dhowr files aad drive saari karo, mid aad rabto in la furo heli.
Hadda, mashruucaagu waa furan computer kale. Waxaad leedahay fursado isku mid ah sidii aad iskaa computer Mac. Marka aad samaysay sixiddiisa, badbaadin sida mashruuc dhammeeyayna. Waxaad isticmaali kartaa drive isla saari karo in ay faylka dib u gudbiyaan, si aad u computer. Waa in aad ogaato in mashaariicda IMovie caadiga ah waxay leeyihiin baaxadda weyn. Taas macnaheedu waa in aad doonaysid in aad u baahan tahay drive laga saari leh awood sare. Mashaariicda IMovie qaarkood ayaa u baahan laba qof oo ah gigabytes meel bannaan. Sidoo kale, habka wareejinta waa gaabis ah oo ay qaadanayso dhawr daqiiqadood ama dheer, haddii file ah oo aad u ballaaran.
iMovie: Import Video / Photo / Audio Faylal ay si iMovie
Sida loo dar Sound Raadka in iMovie
Sida loo soo dhoofsadaan m4v in imovie
Sida loo soo dhoofsadaan wmv in iMovie
Sida loo soo dhoofsadaan AVI in iMovie?
Sida loo abuuro gaabis Motion Videos in iMovie
Top 10 kale oo iMovie u android
Sida loo sameeyo muujiyo Sports ah ee iMovie
> Resource > iMovie > Sida loo badbaadiyo mashaariic iMovie on Mac